बैंक अफ काठमान्डूको बोनस सेयर पाउन पहिला कर तिर्नुपर्ने « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
बैंक अफ काठमान्डूको बोनस सेयर पाउन पहिला कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक अफ काठमान्डूको १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउन पहिला कर तिर्नुभर्ने भएको छ । बोनसमा लाग्ने कर तिरेपछि मात्र लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा बोनस सेयर पठाइने बैंकले जानकारी गराएको छ । बैंकले २०७३ असार ३१ देखि २०७५ असार ७ गतेसम्म सेयर खरिद गरेकाहरुले बोनस पाउन कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
शेयरधनीहरुले बैंक अफ काठमान्डूको खाता नम्बर ३६० ००० ३६० ०१२ मा बोनस सेयरको कर वापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको हो । गत असार ७ गतेसम्म आफ्नो सेयर अभौतिकरण गराइसकेका सेयरधनीको भने डिम्याट खातामा बोनस सेयर जम्मा गरिसकिएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।
असार ७ गते भन्दापछि डिम्याट गराएकाहरुको पनि बोनस सेयर खातामै जम्मा गरिदिने तयारी भइरहेको बैंकको भनाई छ ।
तर, हालसम्म पनि सेयर डिम्याट नगराउनेहरुलाई बैंकले छिटो गर्न आग्रह गरेको छ । आफूलाई पायक पर्ने निक्षेप सदस्य वा सेयर रजिष्ट्रार नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नक्साल काठमाडौंमा गएर गर्न डिम्याट गर्न सकिनेछ ।
साथै अहिलेसम्म पनिसेयरलाई डिम्याट नगराएका लगानीकर्तालाई भने कुनै पनि निक्षेप सदस्यकोमा गएर सेयर डिम्याट गराउन आग्रह गरेको छ कागजी सेयर प्रमाणपत्र डिम्याट भए पछि मात्र बैंकले बोनस सेयर खातामा जम्मा गरिदिनेछ । बैंकको २०७५ असार २८ गते सम्पन्न २३ औं साधारण सभाले १३.२५ प्रतिशत बोनश शेयर पारित गरेको थियो ।
२०७५ असोज १९ गते प्रकाशित
सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा
काठमाडौं । सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा दाङको लालमटीयामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा
गणपूरक संख्या नपुगेपछि, माथिल्लो तामाकोशीको साधारणसभा स्थगित
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सभा स्थगित भएको छ । साधारण सभाका लागि
सुन तोलाको ६५ हजारमा कारोबार
काठमाडौं । ऐतिहासिक मूल्य कायम गरेको सुनको मूल्य बुधबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले बुधबारकोलागि
५ करोड ३२ लाखको आइपिओ आउने
माथिल्लो तामाकोशीको आज साधारणसभा, के-के छन् त एजेण्डा ?
विदेशी डीटीएच र भारतीय टी.भी. च्यानलहरु बन्द
सिरिन्ज प्रकरणः कृपया सिनेमा हेर्न जाँदा आफु बस्ने कुर्सी राम्रोसँग…
आकर्षक बम्पर बोनस सहित प्रिमियर इन्स्योरेन्सले असार ३१ मा डाक्यो साधारणसभा
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ८४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण वितरण गर्ने